Maalinta: Meey 4, 2019
İBB Madaxweynaha Ekrem İmamoğlu; 31 waxay qaadatay talaabada ugu horeysa ee lagu xaqiijinayo ballanqaadyada qiimo dhimista iyo gaadiidka bilaashka ah ee gaadiidka dadweynaha iyadoo biyo loo ballan qaaday dadka deggan Istanbul ka hor doorashooyinka Maxalliga ee Maarso. Ka dib oggolaanshaha Golaha IMM; [More ...]
TCDD iyo Isku-dhafayaasha 13 oo daboolaya wadarta shaqaalaha 050 kun ee 28. Shirkii ugu horreeyay ee shirarka Heshiiska Wadahadalka Wadajir ayaa lagu qabtey 03 May 2019 Jimcihii oo lagu qabtay Xafiiska Guud ee TCDD. [More ...]
Hawlaha kaabayaasha ee Agaasinka Guud ee GASKI way sii soconayaan mashruucan Gaziray oo ay fulisay Dawladda Hoose ee Magaalada Gaziantep. Sababtaas awgeed, Nizip Street iyo Zafer Street halkaasoo ay ku shaqeeyaan GASKİ General Directorate [More ...]
Tareenka Samsun Maanta Free
Duqa magaalada Samsun Metropolitan Mustafa Demir, taageerayaasha Samsunspor ayaa maanta bixin doona adeeg taraam oo bilaash ah. Bayaanka, da Time wuxuu ka bilaaban doonaa 15.30 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor ciyaarta u dhaxaysa 13.30-18.30 Passolig Card, Paper Ticket, [More ...]
Alinur Aktaş, oo mar kale ahaa duqa degmada metroolada ee doorashooyinka maxalliga ah, wuxuu go’aamiyay dulucdiisa ugu weyn ee ‘Bursa Envision’ wuxuuna dadweynaha u sharraxay soo bandhig aad uxooggan xilligii ololaha. [More ...]
Miisaaniyad weyn ee mashruuca Tareen Maglev oo lagu soo bandhigay KBU
Xiisaha weyn ee Mashruuca Tareenka Maglev ee lagu soo bandhigay KBU: Mashaariicda qalin-jabinta ee ardayda sarsare ee injineerinka farsamada, injineernimada gawaarida iyo qeybta injineerinka tareenka ee Kulliyadda Kuliyadda Injineerka ayaa la soo bandhigay. Injineerka Jaamacadda Karabuk [More ...]
Agaasimaha Guud ee TCDD wuxuu gubay Green Light si loogu abuuro mashiinnada nidaamyada tareenada
Maareeyaha Guud ee TCDD Mr. Ali İhsan UYGUN jawaabta su'aasha ah in loo magacaabayo magacaabista Rail Systems Injineer EURASIA RAIL Fair ayaa ka farxisay ardayda injineerinka Rail Systems Engineering. EURASIA RAIL Fair Dr. [More ...]
Maalgashiga 2023 Milyan Dollar ilaa 50 ee nidaamka Rail
yerlilig in nidaamka tareenka diiradda on Turkey, waxaa la qaado tallaabooyin si ay u horumariyaan farsamada in la kordhiyo qiimaha ku daray. In Turkey, tareenka-xawaaraha sare iyo nidaamyada degmada hoostiisa / taraamka tareenka ee baabuurta ilaa 2023 50 si loo daboolo baahiyaha ku dhowaad [More ...]
Maanta taariikhda: 4 May 1886 Mersin-Tarsus-Adana
Maanta, 4 May 1886 Mersin-Tarsus-Adana qaybta Mersin-Tarsus ayaa la furay xaflad. Ka dib markii la soo afjaray dhibaatooyinka, 20 wuxuu bilowday Juun I886.